Apple nwere ike ikwusa taa ịzụta Shazam | Akụkọ akụrụngwa
Amaghị Apple maka ịkọwa banyere nzụta nke ụlọ ọrụ ndị ọ na-eme kwa afọ, na ha bụ ọnụ ọgụgụ buru ibu, naanị ya na-akwado nnweta ya na-akọwaghị ihe kpatara ya. Nsogbu bụ na ndị mgbasa ozi malitere ịkọ nkọ na ihe nwere ike ịbụ nzube nke ịzụta a, njedebe nke na - ahapụ Apple oge ụfọdụ.
Companylọ ọrụ ikpeazụ nwere ike ịghọ akụkụ nke Apple bụ Shazam, ngwa nke anyi ji amata oge niile ihe bu ukwe na ada gburugburu anyi ma buru ihe kwesiri inwe otutu ndi oru.
Dịka m kwuru n'elu, ọ bụ ntụgharị uche banyere mkpa nwere ike inwe Apple na Shazam. Ugbu a, onye enyemaka iOS, Siri, nwere ike ịmata abụ abụ nke Shazam, mana usoro a na-ewe ogologo oge na mgbakwunye na ịnwe ya arịrịọ ọnụ, kama inwe ike ime ya site na ịpị na ihuenyo ahụ, usoro kachasị ngwa ngwa na agile. Ọzọkwa, mgbe anyị nwetara ya ka ọ bido ige ntị, ọ na-ewe ogologo oge iji mata abụ ahụ ma ọ bụ na ọ naghị eme ya nke ọma.
Ihe niile na-egosi na Apple nwere ike ịnwale iji melite sistemụ egwu egwu nke Siri na-enye ugbu a na oge, oge ọ bụla ọ gosipụtara nsonaazụ egwu ahụ, dozie nhọrọ nhọrọ ọkpụkpọ site na Apple Music, Apple egwu ọrụ, kama Spotify ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ dị ka ọ na-eme taa.
Mana o yikarịrị ka Apple chọrọ inweta ọgụgụ isi Artificial nwere ike ịrụ usoro a na ngwa ahụ, usoro nke arụ ọrụ kemgbe ọtụtụ afọ ma ọtụtụ nde mmadụ na-eji ya kwa ụbọchị. Olileanya, ọ bụrụ na a kwadoro akụkọ ahụ, Apple anaghị ewepụ ngwa ahụ n'ahịa ma na-aga n'ihu na-adị maka gam akporo na nke a na-aga n'ihu na-emelite ya, n'ihi na ọ bụrụ na anyị eleghachi anya azụ, anyị nwere ike ịhụ otu ngwa ndị ọzọ Apple zụtara, kwụsịrị ịnweta mmelite.
Ezie na ọ bụ eziokwu na Ọ bụghị naanị Shazam bụ ngwa na-enye anyị ohere ịmata egwu nke gburugburu ebe obibi anyị, ọ bụrụ na ọ bụrụla ihe a na-ejikarị eme ihe n'ihi izi ezi nke okwu ọ na-enye anyị yana ọsọ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Apple nwere ike ikwusa nzụta Shazam taa